HARGEYSA, Somaliland - Shacabka magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa maanta si wanaagsan u ciiday, iyagoo salaadda Ciidul Fidriga kula tukaday meel barxad ah mas'uuliyiin kala duwan.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Saylici, ayaa shacabka ku dhaqan garoonka kubadda cagta GANNAD ee caasimadda Hargeysa kala qayb-galay salaadda Ciidul-fidriga.
Saylici wuxuu salaadda kaddib kumannaan kamid ah shacabkii garoonka Gannad ku tukanayey u jeediyey khudbad uu uga hadlay muhiimada wada-jirka iyo isku-tashiga ummadda, isaga oo shacabkanna Eebbe uga baryey inuu ka aqbalo cibaadadii ay soo wadeen bishii barakaysnayd ee Ramadaan.
Dhanka kale, Saylici ayaa ka hadlay Colaadda gobolka Sool, oo uu si lamid ah Muuse Biixi ugu eedeeyay inay ka dambeyso dowladda Federaalka, oo uu aaminsan yahay inay tahay cid ay dagaalka kula jiraan.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa daboolka ka qaadey inay dowladda Soomaaliya ku hawllan tahay sidii ay dabka ka huraya gobollada Koonfurta dalka ugu soo rari lahayd gudaha Somaliland.
Somaliland ayaa isku dayaysa in dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay dusha u surta mas'uuliyadda dagaalka gobolka Sool, iyadoo lawada ogyahay in cida ay dagaalka kula jiraan tahay dowladda Puntland.
Wasiirka Warfaafinta Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo dhawaan Shir Jaraa'id ku qabtey Garoowe ayaa beeniyay warka maamulka Muuse Biixi ee ah in dowladda Federaalka ay ku lug leedahay dagaalka Tukaraq.
Maamulka Somaliland ayaa sidoo kale eedeymo u jeediyay Puntland oo dagaal kala dhaxeeya.
Somaliland: Xoghayihii Xisbiga Kulmiye oo lagu dilay Laascaanood
Somaliland 11.05.2018. 01:15
Xilldhibaanada Somaliland oo baaq culus u jeediyay Shacabka Garowe
Somaliland 10.10.2018. 23:34
Somaliland oo Digniin u dirtay Puntland iyo DFS [Daawo]
Somaliland 14.01.2018. 17:14
Saylici oo eedayn culus u jeediyay madaxda Somaliland
Somaliland 23.10.2018. 16:47
Puntland Focus Group oo war kasoo saarey duulaanka Somaliland
War Saxaafaded 28.05.2018. 14:01